ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Squidoo! (Shoemoney မှတ်ချက်ယူ) | Martech Zone
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Squidoo! (Shoemoney မှတ်စုယူ)
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2007 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2015 Douglas Karr
ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာဘလော့ဂ်ထင်မြင်ချက် spam အချို့ကိုကျွန်ုပ်တုန်လှုပ်ခဲ့သည် ကွမ်းခြံကုန်း မှန်ဘီလူး။ ဤတိုက်ကြီးတွင် Spam ကိုမခံရပ်နိုင်သောလူတစ်ယောက်ရှိပါကဖြစ်နိုင်သည် ရှေ Godin၏စာရေးဆရာ ခွင့်ပြုချက်စျေးကွက် နှင့် Squidoo တည်ထောင်သူ။
Spam များကိုမှတ်သားပါ။ Squidoo သည်ဆိုင်ဖွင့်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ Squidoo ကိုကောင်းတဲ့မှတ်စုတစ်ခုချလိုက်ပြီးသူကမှန်ဘီလူးကိုပြန်သုံးသပ်ပြီး spammer တစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့ (တနင်္လာနေ့)၊ Squidoo အသင်းမှသူတို့သည်အသင်းဝင်များ၏မှန်ဘီလူးများကိုကြည့်ရှုကြောင်းကြင်နာစွာစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Spam မှရရှိသောတွဲဖက်စျေးကွက်အတွက်ရှေ့ပြေးအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ထင်ရှားသည်။ သူတို့ကအကောင့်ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ငါအတည်ပြုပြီးသွားပြီ
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသင်လုပ်ရန်ကြီးမားသောစကားကိုကြားခဲ့ဖူး Shoemoney သည် MyBlogLog မှကျဆင်းခြင်းအကြောင်း ပြီးနောက် သူသည်အခြားအဖွဲ့ဝင်များ၏ User ID များကိုသူ၏ site ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်… MBL ၏ privacy model တွင်အားနည်းချက်တစ်ခု။ Shoemoney သည်အဖြစ်အပျက်နှင့်တန်ပြန်မှုများအကြောင်း MBL မှသူတို့၏ဘလော့ဂ်တွင်မှတ်စုတစ်ခုအရပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
ဒီမှာယူပါ ငါ Shoemoney ကိုဆန့်ကျင်ဘာမှမရှိဘူးသေချာတယ်၊ MyBlogLog ဆန့်ကျင်ဘာမှမရှိဘူး။ MyBlogLog သည်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ blog နှင့်အခြားသူများအတွက်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Shoemoney ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ငါပြောခဲ့တာပဲ MBL Shoemoney သည် ID သုံးခုကိုပထမဆုံးတင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။
ငါမယုံဘူး MBL Shoemoney ဘယ်သွားမလို့လဲ? သူကအဲဒီမှာတစ်ရာထားရန်သွားခဲ့သလား တစ်ထောင်? သူက IDs ၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာ SQL injection script တစ်ခုခုရေးခဲ့သလား။ MBL သေချာမသိခဲ့ပါဒါကြောင့်သူတို့ကလျင်မြန်စွာ ... သူ့ကိုဖြတ်။ ဒါကငါတို့အားလုံးအတွက်ကောင်းတယ်။
Shoemoney ကိုအပြစ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါမကောင်းဘူးလား။ ငါတို့လိုချင်တာမဟုတ်လား။ တစ်နာရီအတွင်းရောင်းချသူတစ် ဦး သည်လုံခြုံရေးတိုက်ခိုက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည့်ကာကွယ်မှုတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
... ပြန် Squidoo, Shoemoney - ကျေးဇူးပြုပြီးသတိပြုပါ
ငါကုမ္ပဏီတစ်ခုမှပြanနာတစ်ခုအစီရင်ခံနှင့်ငါသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်တုံ့ပြန်ရန်အချိန်ပေးခဲ့တယ်။ ငါကသူတို့ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအတည်ပြုချက်အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိ, သူတို့ကဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သူတို့ကအချိန်မီထုံးစံ၌ဖြေရှင်းရန်ကတိပေးခဲ့သည်။ ယနေ့ငါအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါငါစစ်ဆေးပြီးအသုံးပြုသူနှင့်သူတို့၏မျက်ကပ်မှန်များပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ လုံခြုံရေးလုံခြုံရေးအပေါက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ပြissueနာကြုံရသောအခါသတင်းအချက်အလက်များကိုအချိန်မီသတင်းပို့ရန်နှင့်တုန့်ပြန်ရန်အချိန်ပေးရန်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုသင်ကြွေးတင်နေသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ၂၀/၂၀ ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဖတ်ရင် Shoemoney ကိုပိုပြီးလေးစားမှာပါ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Pilgrim Shoemoney သည် MyBlogLog နှင့်တွဲလုပ်ခဲ့သည့်ဘလော့ဂ်သည်ညမတိုင်မီကလုံခြုံရေးအပေါက်တစ်ခုချိတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
Shoemoney သည်အောင်မြင်မှုကိုသတင်းပို့နိုင်သည် MBL နှင့်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအစီရင်ခံစာ၏အချိန်ကနေဆုံးမပဲ့ပြင်၏အချိန်အထိတစ်နာရီထက်နည်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ဘူး။ သူတို့မတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်၊ ဒါပေမယ့်ကွက်လပ်ကိုမတင်ပါနဲ့။ သူတို့ကိုကင်ပါ။ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါ။ ဒါကလူတိုင်းအတွက်ကြောက်စရာပါပဲ
ပြtheနာကိုသတင်းပို့ခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်နှောင့်ယှက်မှုများစွာဖြစ်စေနိုင်ပြီးသပိတ်မှောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ ဘလော့ဂ်များစွာမှမှတ်ချက်များကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထိုသုံးစွဲသူများအားသူတို့၏ ID ဖော်ပြခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ငါ Shoemoney ကျေးဇူးတင်ကြလိမ့်မယ်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိမ့်မယ် MBL။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာမင်းနဲ့ငါကိုရှာနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
yea အိုး ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Gil (မှ။ ) ကွမ်းခြံကုန်း) ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှေ ဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်သင်အချိန်ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ရှာဖွေခြင်းကိုသင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
PS: ငါမီးလျှံစစ်ကိုမရှာဘူး။ Shoemoney ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်။ သူဟာမယုံနိုင်လောက်တဲ့နောက်လိုက်နဲ့ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ရဲ့အင်အားကြီးတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာစွမ်းရည်ပြည့်ဝသူပါ။ ငါသူတစ်နေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထိတွေ့မှု၏ထက်ဝက်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမြင်ကိုထုတ်ပြီးအနာဂတ်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်လာရင်သူချဉ်းကပ်ပုံကိုပြန်စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ သူသည်အခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်ထပ်ဆင့်ပြသနာများကိုတွေ့လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ရန်သူမျှော်လင့်ပါသည်။
26:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 06 တွင်
ငါပုံမှန်အားဖြင့် flamewars တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် dont ... အချိန်နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်ကြောင်းအတွက်အမြတ်အစွန်းအများကြီးမဟုတ်ပါ =)
မင်းနောက်ကွယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သမိုင်းနဲ့အရာတွေအများကြီးပျောက်နေပေမယ့် mybloglog ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဖြစ်ခဲ့တာ
26:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 10 တွင်
လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်၊ မင်းလုံးဝမှန်ပါတယ်၊ ငါဒါအတွက်တတိယပါတီပဲ။ ဒါကြောင့်ငါ့အမြင်အရမ်းဆိုးနေတယ်။
ခင်ဗျားဟာမီးလျှံစစ်ပွဲတွေမှာမပါ ၀ င်တာ၊ ငါပconflictိပက္ခကိုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့ဘလော့ဂါတွေကိုလေးစားတယ်။
မင်းက MBL ကိုခဏလောက်ကောင်းကောင်းကင်ထားတယ်။ ငါအမှုအရာ mend အပေါ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
26:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 05 တွင်
ထိုသူကိုအကြီးမားဆုံးမိုက်မဲသောအမှားအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မစဉ်းစားသောသေးငယ်သောအရာများသည်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်လာစေနိုင်သည်။ မိုက်မဲမှုကြောင့်နောက်ထပ်မှတ်ချက်မရှိပါ… ..
27:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 23 တွင်